सेनाका गाडीले ठक्कर दिँदा बालिकाको मृत्यु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ३, २०७४ रवीन्द्र उप्रेती
महोत्तरी — निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाली सेनाले भाडामा लिएको गाडीले ठक्कर दिँदा सोमबार एक दलित बालिकाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीकाअनुसार फस्ट रैफल गणको औरहीस्थित प्लाटुन अपरेटिङ बेल्टले प्रयोग गरेको ना ४ च १५४१ नंको पिकअपमा साँझतिर ठोकिँदा औरही नपा ५ श्रीपुरकी ७ वर्षीया किरणकुमारी रामको मृत्यु भएको हो ।
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७४ १८:३८
रौतहटमा २ वटा वडामा कांग्रेस, माओवादी र संघीय फोरम १/१ वडामा विजयी
वृन्दावन नगरपालिकामा मतगणना स्थगित
आश्विन ३, २०७४ पवन यादव
रौतहट — स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत रौतहटमा जारी मतगणनाको पछिलो परिणामअनुसार २ वटा वडामा कांग्रेसका वडाध्यक्ष प्यानलसहित विजयी भएका छन् ।
परोहा नगरपालिकाको वडा नं. १ को अध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार शेख समिउल्लाह प्यानलसहित विजयी भएका छन् । उनले निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी एमालेका उम्मेदवार मनोज साहलाई १ सय १० मतको अन्तरले पराजित गरे । समिउल्लाहले ४ सय ७३ र मनोजले ३ सय ६३ मत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यस्तै ईसनाथ नगरपालिकाको वडा नं. १ को अध्यक्षमा कांग्रेसकै विगु साह बनिया प्यानलसहित विजयी भए । उनले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी लोकतान्त्रिक फोरमका उम्मेदवारलाई २ सय ७१ मतको अन्तरले पछाडि पार्दै विजयी हासिल गरेका हुन् । बनियाले ५ सय ८२ र नमस्कारका उम्मेदवारले ३ सय ११ मत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यस्तै परोहा नगरपालिकाको वडा नं. २ मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार महम्मद एजाजुल रहमान पनि प्यानलसहित विजयी भएका छन् । उनले आफ्ना निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका शेख सेराजुललाई ८७ मतको अन्तरले पराजित गर्दै वडाध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । रहमानले ५ सय ४५ र सेराजुलले ४ सय ५८ मत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यस्तै देवाही गोनाही नगरपालिकाको वडा नं. १ को अध्यक्षमा संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार शेख नुरुल्लाह प्यानलसहित विजयी भएका छन् ।
उनले निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवार शेख दाउदलाई २ सय ७ मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेका हुन् । नूरुल्लाहले ५ सय ५४ र दाउदले ३ सय ४७ मत प्राप्त गरेका थिए ।
यसैबीच, रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा मतगणना स्थलमा प्रवेश गर्न पासको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झडप भएको छ । विवाद भएपछि साँझ ६ बजेदेखि यहाँको मतगणना स्थगित भएको छ ।